Masihlangane ne-Synaptic ku-LMDE <° Linux | Kusuka kuLinux
Asihlangane ne-Synaptic ku-LMDE <° Linux
Omunye wemibuzo ejwayelekile kakhulu kubasebenzisi abaqala ukungena I-GNU / Linux, ukuthi ungazifaka kanjani noma uzikhiphe kanjani izinhlelo nokuthi hlobo luni lwamaphakeji angafakwa. Sizokukhombisa enye yezindlela ezilula zokwenza lo msebenzi, usebenzisa I-Synaptic, futhi, sizokutshela kafushane ukuthi iyini nokuthi singayisebenzisa kanjani.
Imvamisa ku Windows, ukufaka uhlelo ifayela nge-extension .exe futhi kufanele sisebenzise i Okulandelayo »Okulandelayo ngenombolo eyodwa noma enye ye-serial kanye nenqubo yokubuyela emuva (khipha), siya ku- Iphaneli Yokulawula »Faka / Susa Izinhlelo.
Endabeni I-GNU / Linux, kukhona futhi esingakubiza ngokuthi okwethu .exe kepha-ke, banelinye igama nesakhiwo. Imvamisa amaphakheji amaningi ku- I-GNU / Linux Zigcinwa ezinqolobaneni, futhi kusetshenziswa amathuluzi ahlukahlukene ukuziphatha. Mhlawumbe ezaziwa kakhulu noma ezaziwayo yi- .deb futhi i .rpm futhi zombili zingaphathwa ngu I-Synaptic, ekuqaleni okwakuyi-interface ye- I-APT.
Sebenza nge I-Synaptic ilula kakhulu. I-interface ayisiyinkimbinkimbi futhi akuvamile ukuthi umsebenzisi omusha asebenzise noma aguqule zonke izinketho zayo. Ngokuvamile, njengoba kuza ngokuzenzakalela, imisebenzi ejwayelekile ingenziwa.
I-Synaptic ubelokhu efana naye Faka / Susa Izinhlelo de Windows. Ngokusebenza kwayo, kufanele ukuthi silungiselele (esimweni se- Debian kanye nokuphuma kwayo) izindlela eziya ezinqolobaneni lapho kutholakala khona amaphakheji, kufayela /etc/apt/sources.list. Kusuka kulelo fayela, I-Synaptic ithola indlela edingekayo yokufinyelela amaphakheji.
1 Ukwazi isikhombimsebenzisi.
2 Ezinye izinketho.
3 Futhi na ngaphezulu?
Kuhle ukwengeza ukuthi i-interface ye I-Synaptic en I-LinuxMint, ihlukile ku- Debian. Ngasizathu simbe ku- I-LinuxMint, inkinobho ayifakiwe Bheka zonke izibuyekezo. Kepha ake sibuyele emuva kusixhumi esibonakalayo.
Phezulu sinefayela le- Ibha yemenyu esizobona ezinye izinketho ngokuhamba kwesikhathi. Qhubeka kancane phansi, izinkinobho ezilandelayo:
Shaja kabusha: Vuselela uhlu lwephakheji.
Faka isicelo: Lapho simaka iphakheji ukufaka noma ukukhipha, sisebenzisa le nkinobho ukufaka ushintsho.
Izakhiwo: Ibonisa izici zephakeji, incazelo yalo kanye nokuncika kwayo.
Sesha: Ibonisa ingxoxo enezinketho eziningana ukusesha amaphakheji ngokuya ngamapharamitha athile.
Ngezansi sinesibonisi esihlukaniswe ngamakholomu amabili. Ngakwesobunxele kukhona izinketho ngokwesigaba esisikhethayo. Shayela isigaba sezinkinobho: Izigaba, Isimo, Umsuka, Izihlungi kanye Nemiphumela Yokucinga.
Izigaba: Ibonisa amaphakheji ahlelwe ngezigaba. Uma sifuna ukusesha iphakethe elihlobene nefayela le- Imvelo ye-Gnome Desktop, isibonelo, kufanele nje siye esigabeni I-Gnome.
Isimo: Kulesi sigaba sizothola ukuthi yimaphi amaphakheji angathuthukiswa, angasasebenzi, afakiwe noma asalayo.
Umsuka: Ibonisa umsuka (amakhosombe) wamaphakeji. Ngamanye amagama, ukuthi zivelaphi.
Izihlungi: Kulesi sigaba ungafaka izihlungi ezithile ukuthola izinhlobo ezahlukahlukene zolwazi. Kubalulekile ukwazi ukuthi amaphakheji aphukile avela lapha.
Imiphumela yosesho: Ngokuyikho okwenzayo njengoba igama laso likhombisa, ibonisa imiphumela yokucinga ku I-Synaptic.
Ngakolunye uhlangothi sinohlu lwamaphakeji esingawafaka ngeSynaptic. Uma sikhetha noma iyiphi yazo bese sichofoza kwesokudla, singakhetha izinketho ezithile ezifana nokuthi:
Susa ukumaka: Susa ukumaka iphakheji uma ngabe sikhethe ngaphambilini.
Bheka ukufaka: Bheka iphakethe ukufaka.
Maka ukufaka kabusha: Kulungile, khetha uphinde ufake iphakheji.
Maka ukuze ubuyekeze: Uma iphakheji linokubuyekezwa, siyikhetha ngale ndlela.
Maka ukusula: Susa kuphela iphakheji ekhethiwe.
Hlola ukususa ngokuphelele: Susa iphakheji ekhethiwe ngokuncika kwayo okunconyiwe. Ukuncika okuphakanyisiwe kuya ekucushweni okusele.
Ama-propiedades: Yenza okufanayo nenkinobho ephezulu.
Umaki unconyelwe ukufakwa: Khetha ukuncika okunconyiwe kwephakeji ongakufaka.
Maka Okuphakanyiselwe Ukufakwa: Khetha ukuncika okuphakanyisiwe kwephakeji ozoyifaka.
Ukwazi lokhu sesivele sisebenzisana nakho I-Synaptic, kepha singenza ezinye izinto, ngokwesibonelo ukushintsha imithombo yezinqolobane. Okuthile okuwusizo uma izibuko esizisebenzisayo zihamba kancane noma phansi. Ngalokhu sizokwenza Ukucushwa »Indawo yokugcina izinto.
Ewindini lezinketho esilitholayo, sidinga kuphela ukwazi amathebhu ama-3 ukuze sikwazi ukuphatha amakhosombe ethu. Kowokuqala, sithola amagatsha esiwasebenzisayo I-LinuxMint (Okumqoka, okungenhla komfula, ukungenisa, ukubuyela emuva kanye neRomeo). Ukuhlola / ukungahloli kuphela ifayela kuhlelwe /etc/apt/sources.list.
Kuthebhu yesibili sifaka amakhosombe angekho Mint, okungukuthi, i- Amaphakheji Wenkampani Yesithathu njengoba kwe Debian, the I-PPA de Ubuntu noma yimuphi umthombo ohambelana ne- I-LMDE.
Kuthebhu yesithathu, singasebenzisa izibuyekezo ezizenzakalelayo futhi ngaso sonke isikhathi lapho sifuna zisebenze khona.
Futhi na ngaphezulu?
Uma uyidinga, I-Synaptic futhi kufanele isethe i- Ummeleli wenethiwekhi futhi i Ukusatshalaliswa esifuna ukuyisebenzisa ngokuzenzakalela. Ngalokhu sizokwenza Izilungiselelo »Okuncamelayo.
Ukuchaza okuncane mayelana ne- Ukusatshalaliswa, uma sibheka ifayela /etc/apt/sources.list, sinezakhiwo ezimbili okufanele sizisebenzise (qaphela umbhalo onemibala):
deb http://packages.linuxmint.com/ debian ukungenisa okukhulu komfula
deb http://ftp.debian.org/debian testing main ayinayo mahhala
deb http://security.debian.org/ testing/ updates main don non-free
deb http://www.debian-multimedia.org testing main okungeyona mahhala
Okuzenzakalelayo, I-Synaptic njalo kuthatha ukusatshalaliswa okuphezulu kakhulu, okusho ukuthi uma iphakethe lingena I-Pidgin 2.8 ekuphumuleni kwe Minti (debian) kanye nohlobo 2.9 ku I-Debian (testing), uhlelo luzophakamisa ukufaka inguqulo 2.9.
Vele, lokhu kungaguqulwa uma thina ngokwethu sikhetha ukusabalalisa esifuna ukukusebenzisa sisebenzisa inketho: Khetha izinhlobo ze-:
Futhi-ke, uma sisebenzisa ummeleli ukuxhuma nge-http, sinenketho yokuyibeka ngesandla:
Kunamanye amathuluzi okuphatha amaphakheji ethu, uwavuselele futhi uwafake. Ubuntu ngokwesibonelo manje kufaka phakathi i- Isikhungo Sesoftware, futhi I-LMDE inokufana okufanayo, kepha ngandlela thile I-Synaptic Kuphelele ngokuphelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Asihlangane ne-Synaptic ku-LMDE
Ngiyabonga kakhulu, iqiniso ukuthi ngisaqala nge-linux futhi leli thuluzi libalulekile. Kuhle ukumazi kangcono
Ngidinga ukwazi ukuthi ngivimbela kanjani i-Linux mint 17 Quiana ekuzameni ukuvuselela i-repo esizeni sayo esisemthethweni
Futhi kufakwe emithonjeni yami.hlu ikheli elisha lokuvuselela eselivele lihlolwe ku-Ubuntu 14.04 futhi lihambisana neMint kepha lapho (thola ukuthola isibuyekezo) okulandelayo kukhonjisiwe:
Iphutha http://ubuntu.mes.edu.cu InRelease ehlongozwayo ethembekile
Iphutha http://packages.linuxmint.com qiana InRelease
Iphutha http://archive.ubuntu.com i-InRelease ethembekile
Iphutha http://archive.ubuntu.com izibuyekezo ezethembekile InRelease
Iphutha http://security.ubuntu.com i-trusty-security InRelease
Iphutha http://ubuntu.mes.edu.cu i-trusty-security InRelease
Iphutha http://ubuntu.mes.edu.cu izibuyekezo ezethembekile InRelease
Iphutha http://ubuntu.mes.edu.cu i-InRelease ethembekile
Iphutha http://archive.ubuntu.com ukukhishwa okuthembekile.gpg
Ayikwazanga ukuxazulula i- "archive.ubuntu.com"
Iphutha http://security.ubuntu.com ukukhishwa kwe-trusty-security.gpg
Ayikwazanga ukuxazulula "security.ubuntu.com"
Iphutha http://ubuntu.mes.edu.cu ukukhishwa okuphakanyisiwe okwethembekile.gpg
Ayikwazanga ukuxazulula "ubuntu.mes.edu.cu"
Iphutha http://packages.linuxmint.com Ukukhishwa kwe-qiana.gpg
Ayikwazanga ukuxazulula "packages.linuxmint.com"
Iphutha http://ubuntu.mes.edu.cu ukukhishwa kwe-trusty-security.gpg
Iphutha http://ubuntu.mes.edu.cu izibuyekezo ezethembekile Release.gpg
Iphutha http://archive.ubuntu.com izibuyekezo ezethembekile Release.gpg
Iphutha http://ubuntu.mes.edu.cu ukukhishwa okuthembekile.gpg
Iphutha http://extra.linuxmint.com qiana InRelease
Iphutha http://extra.linuxmint.com Ukukhishwa kwe-qiana.gpg
Ayikwazanga ukuxazulula i- "extra.linuxmint.com"
Iphutha http://archive.canonical.com i-InRelease ethembekile
Iphutha http://archive.canonical.com ukukhishwa okuthembekile.gpg
Ayikwazanga ukuxazulula i- "archive.canonical.com"
W: Ayikwazi ukuthola http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-proposed/InRelease
W: Ayikwazi ukuthola http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-security/InRelease
W: Ayikwazi ukuthola http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-updates/InRelease
W: Ayikwazi ukuthola http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty/InRelease
W: Ayikwazi ukuthola http://packages.linuxmint.com/dists/qiana/InRelease
W: Ayikwazi ukuthola http://extra.linuxmint.com/dists/qiana/InRelease
W: Ayikwazi ukuthola http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/InRelease
W: Ayikwazi ukuthola http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-updates/InRelease
W: Ayikwazi ukuthola http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-security/InRelease
W: Ayikwazi ukuthola http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/trusty/InRelease
W: Ayikwazi ukuthola http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-proposed/Release.gpg Ayikwazanga ukuxazulula "ubuntu.mes.edu.cu"
W: Ayikwazi ukuthola http://packages.linuxmint.com/dists/qiana/Release.gpg Ayikwazanga ukuxazulula "packages.linuxmint.com"
W: Ayikwazi ukuthola http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg Ayikwazanga ukuxazulula i- "archive.ubuntu.com"
W: Ayikwazi ukuthola http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-updates/Release.gpg Ayikwazanga ukuxazulula i- "archive.ubuntu.com"
W: Ayikwazi ukuthola http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-security/Release.gpg Ayikwazanga ukuxazulula "security.ubuntu.com"
W: Ayikwazi ukuthola http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-security/Release.gpg Ayikwazanga ukuxazulula "ubuntu.mes.edu.cu"
W: Ayikwazi ukuthola http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-updates/Release.gpg Ayikwazanga ukuxazulula "ubuntu.mes.edu.cu"
W: Ayikwazi ukuthola http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg Ayikwazanga ukuxazulula "ubuntu.mes.edu.cu"
W: Ayikwazi ukuthola http://extra.linuxmint.com/dists/qiana/Release.gpg Ayikwazanga ukuxazulula i- "extra.linuxmint.com"
W: Ayikwazi ukuthola http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg Ayikwazanga ukuxazulula i- "archive.canonical.com"
W: Amanye amafayela e-index ahlulekile ukulanda. Zinganakwa, noma ezindala zisetshenzisiwe esikhundleni.
E: Ayikwazanga ukukhiya / var / lib / dpkg / lock - open (11: Insiza ayitholakali okwesikhashana)
E: Ayikwazanga ukukhiya umkhombandlela we-admin (/ var / lib / dpkg /), mhlawumbe kukhona enye inqubo oyisebenzisayo?
*************** Ungayixazulula kanjani le nkinga? **************************
Ngicela ungisize ngicela
Isixazululo sokusetshenziswa kwememori yeFirefox?
Izinguquko ku-Blogger naku-Picasa